Apple inotangisa shambadziro nyowani yeiyo 'Shot pa iPhone' mushandirapamwe neakakurumbira maJapan Decotoras | IPhone nhau
Apple inotangisa shambadziro nyowani yeiyo 'Shot pa iPhone' mushandirapamwe une yakakurumbira maJapan Decotoras
Apple inodzokera pakurwiswa nezvombo zvekushambadzira, zvombo zvavanobata zvakakwana kusimudzira zvavanoshandisa. Uye ndezvekuti mumakwikwi akadaro eetekinoroji ecosystem zvakakosha kuti uzive kuti ungatengesa sei zvigadzirwa zvako kuyedza kuzvitsauranisa iwe kubva kumakwikwi ako. Uchapupu hweiyi mushandirapamwe 'Akapfura pa iPhone', pamwe inonakidza kwazvo kushambadzira yevakomana kubva kuCupertino, mushandirapamwe unotiratidza mavhidhiyo uye mifananidzo yakatorwa neApple iPhones.
Uye ivo vazviita zvakare, uye ino nguva vachizvigadzirira mukati meJapan, imwe yemisika iyo iyo Cupertino chinzvimbo chinonyanya kufarira. Mushure mekusvetuka tinokuzivisa iwe Lady Misaki, anozivikanwa decotora ChiJapanese (chakakurumbira chinopenya rori) icho Apple inoda kuenderera ichikurudzira iyo cMifananidzo yemifananidzo yeiyo nyowani iPhone XS uye XR.
Sezvawaona munzvimbo yaLady Misaki (yakagadzirwa naKazuya Sekino ane hushamwari), Apple inoda kusimudzira zvakarezvese zvatingaite nemakera eiyo nyowani iPhone XS. Uye maitiro ekuratidza akanakisa emifananidzo maficha emidziyo iyi? mune yakaderera mwenje mamiriro. Uye ndezvekuti kunyangwe decotoras, aya marori echiJapan psychedelicIvo vakagadzirirwa nezviuru zvemwenje mwenje, mamiriro ayo nzvimbo yakapfurwa iri yakaderera mwenje, husiku. Ndokusaka ma decotoras zvinotaridzika kushamisa nemavara avo ese muhusiku hweJapan.
Muenzaniso mutsva unonakidza wezvese zvatingaite nemidziyo yedu. Isu tatozvitaura kakawanda: dzimwe nguva isu tinosimbirira kuve neazvino kamera kutora mifananidzo mitsva uye Isu tinongofanirwa kutarisa iyo yatinotakura muhomwe yedu, yedu iPhone, kuyedza kuwana kwedu kwese kugona uye tora mifananidzo uye unyore mavhidhiyo. Saka ikozvino iwe unoziva, tora mukana wevhiki kuburitsa yako yakasarudzika divi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone Xs » Apple inotangisa shambadziro nyowani yeiyo 'Shot pa iPhone' mushandirapamwe une yakakurumbira maJapan Decotoras
Mavara matsva e iPhone uye Apple Watch kesi